Xaaladda Gaza oo cakiran - BBC Somali
Xaaladda Gaza oo cakiran
Image caption Israa'iil waxa ay xoojisay duqeymaha ay ku hayso Gaza kaddib markii uu burburay heshiiskii xabbad joojinta.
Kooxda Falastiyiniinta ee Xamaas ayaa sheegtay in aanay wax war ah ka hayn askari israa'iili ah oo loo maleynayo in lagu qafaashay Gaza.
Xamaas ayaa sheegtay in askarigaasi oo lagu magacaabo Xadar Goldin laga yaabo in lagu dilay dagaalka Qaza.
Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in labo ka mid ah askarteeda ay dhinteen, mid kalena nolosha lagu qafaashay balse lataliyaha madaxweynaha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in qafaalashada askarigaasi ay dhacday ka hor inta aysan billaaban xabbad joojinta.
Falastiyiniinta ayaa dhankooda sheegaya in tiro ka badan 90 qof lagu dilay duqeymaha cusub ee Israa'iil tan iyo markii maalintii Jimcaha ahayd uu burburay heshiiskii xabbad joojinta.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in loo baahan yahay xabbad joojin ka hirgisha marinka Qaza, si loo helo fursad looga wada hadlo walaaca ku saabsan xaquuqda ay Israaiil u leedahay in ay is-difaacdo balse arrintaasi ay horseedeyso dhibaatada shacabka falastiyiniinta.
Israa'iil waxa ay wacad ku martay in ay awood u ageedsan doonto kooxda Xamaas, kaddib markii uu saacado gudahood ku burburay heshiiskii xabbad joojinta ee saddexda maalmood ahaa.
Israa'iil iyo Xamaas ayaa midba midka kale ku eedaynayo in uu jabiyay heshiiskaasi.